Basaasiinta Ruushka waxay diiradda saarayaan Hawaii markab ka yimid waqooyiga xeebta dalxiiska ee Oahu
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Sirta Safarka » Basaasiinta Ruushka waxay diiradda saarayaan Hawaii markab ka yimid waqooyiga xeebta dalxiiska ee Oahu
Crime • Wararka Dowladda • News • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Soo-booqdayaasha Ruushka waxaa lagu soo dhaweynayaa Hawaii, laakiin maahan basaasiin Ruush ah. Ruushka oo saaran markab basaasid ah oo ka shaqeeya 200 mayl waqooyiga Oahu ma heli doono Aloha ku soo dhawow booqashada biyaha Hawaii.
Markab ilaalo ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ruushka ayaa la arkay isaga oo ku hakanaya xeebta galbeed ee Hawaii bishii May sida ay qortay USNI News
Maanta markab basaas ah oo Ruush ah ayaa la arkay isagoo ka shaqeynaya meel ka baxsan biyaha Mareykanka ee waqooyiga xeebta ee Oahu
Tijaabinta difaaca gantaalaha Mareykanka ayaa si kooban dib loogu dhigay ka bixitaanka Kauai dabayaaqadii bishii hore sababo la xiriira joogitaanka markabka basaaska Ruushka.
Dalxiiska ayaa ku soo badanaya Aloha Gobol. Qofna kama walwalayo markabka basaasnimada Ruushka oo kaliya 200 mayl woqooyi ka xigta Jasiiradda Oahu.
Guud ahaan, biyaha caalamiga ah ayaa bilaabmaya kudhowaad 200 mayl-badeed xeebta dalka una sii socota dibedda.
Markab laga leeyahay Ruushka ayaa hadda ka shaqeeya biyahan. Markabka waxaa saaran saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka oo loo yaqaan basaas. Hadafkoodu waa inay soo ururiyaan xogaha ku saabsan rakibaadda militariga Mareykanka ee jasiiradda Oahu, Hawaii. Sidaas waxaa warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka
Markabka wax basaasa ayaa laga helay waqooyiga Jasiiradda Oahu.
Bishii la soo dhaafay markab basaas ah oo Ruushku leeyahay ayaa dhowr maalmood ku caariday biyaha caalamiga ah ee Kauai. Joogitaanka markabkan ayaa dib u dhigtay tijaabada gantaalaha Mareykanka.
Machadka Naval Institute ee Mareykanka, oo ahaa kii ugu horreeyay ee soo sheega joogitaanka markabka, ayaa sheegay inuu yahay markabka sirdoonka guud ee Kavyiya (SSV-535) ee Navy Vishnya-class kaaliyaha guud.
The Fasalka Vishnya (sidoo kale loo yaqaano Meridian fasalka) waa koox ah maraakiibta ururinta sirdoonka loo dhisay Ciidamada Badda Soviet sannadihii 1980-naadkii. Maraakiibtu waxay ku sii shaqeeyaan adeegga Ciidamada Badda Ruushka. Magacaabista Soofiyeeti waa Project 864. Ciidamada Badda ee Ruushka waxay shaqeeyaan toddobo ka mid ah maraakiibtaan.
Markabka ku saleysan Vladivostok ee howlaha Hawaiian waa mid ka mid ah toddobada AGI ee ku takhasusay calaamadaha sirdoonka, USNI News ayaa sidaas tiri. Ma aysan caddeyn caawa haddii markabka aruurinta Ruushka ee ka shaqeynaya Oahu uu la mid yahay kii lala kulmay dhammaadkii bishii Maajo.
Sida lagu daabacay qoraalkan, Seddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ka yimid saldhiga Hickam Airforce ayaa axadii ka kicitimay si ay ciidamada badda ee Ruushka u xakameeyaan howlgalka ugu weyn tan iyo dagaalkii qabow oo 300 oo mayl u jira xeebta Aloha Gobol,
Sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa u sheegay wargayska Hawaii: “Waxaan u shaqeyneynaa si waafaqsan sharciga caalamiga ah ee badaha iyo hawada si aan u hubino in ummadaha oo dhami ay sameyn karaan wax la mid ah cabsi la’aan ama tartan iyo si loo helo xoriyad iyo furnaan Indo-Pacific ah. Maaddaama Ruushku ka dhex shaqeynayo gobolka dhexdiisa, waxaa la filayaa inuu ku sameeyo si waafaqsan sharciga caalamiga ah. ”
Ciidamada Cirka ee Mareykanka ayaa heysta F-22s, duuliyeyaal, ilaaliyayaal, iyo shaqaale hub ah oo wacaya 24 saac maalintii Hickam si ay uga jawaabaan hanjabaadaha hawada ee jasiiradaha Hawaiian oo qeyb ka ah howlgalka digniinta difaaca hawada.